Ubad & Waalid
Kronoberg waxey qani ku tahay balliyada iyo keymaha waxaana ka jira gaadiidka bulshada oo aad u fiican, tagana magaalooyinka ku yaal hareeraha gobolka. Degmooyinka gobolka qaarkood waxaa ka jira guryo la'aan. Basaska iyo tareennada si fiican ayeey ugu shaqeeyaan degmada, dadka degmooyinka banaankooda degan ayaana faa'iido weyn ku qabo ineey gaadiidyadaas si fiican u shaqeynayaan. Jaanisyo dhinaca degida iyo shaqada ah ayaa ka jira degmooyinka gobolka qaarkood.
Shaqa bixiyaha ugu weyn ee gobolka waa degmada Växjö oo eey u shaqeeyaan 7575 shaqaale, halka shaqa bixiyaha ugu weyn ee dhinaca shirkadaha gaarka loo leeyahay uu yahay IKEA of Sweden AB oo eey u shaqeeyaan 1075 shaqaale. Shaqaalaha ugu badan waxeey ka shaqeeyaan dhinaca caafimaadka iyo shaqooyinka la xiriira daryeelka qoyska iyo qofka. Intaas in la eg waxeey ka shaqeeyaan beec mushtarka, hoteellada, makhaayadaha iyo adeega bulshada ee gobolka Kronoberg. Kronoberg waxeey waligeed ku jirtay kaalimaha koowaad marka laga fiiriyo dhinaca shirkadaha yaryar ee dhisan gobolka.
Linnéuniversitetet waxeey ka mid tahay goobaha waxbarasho ee ugu cusub Iswiidhan oo dhan, waxaana la aasaasay 2010 markii leesku daray jaamacada Växjö universitet iyo machadka Högskolan i Kalmar. Linneuniversitetet waxeey xarumo waxbarasho ku leedahay labada magaalo. Waxaana dhigta arday gaaraya 40000, oo kala dhigta 150 barnaamijyo waxrasho iyo 2000 oo koorsooyinka gaarka loo akhristo ah. Ardayda booska koowaad ka dhigta Linnéuniversitetet markeey jaamacadaha raadsataan waxeey kor ugu kaceen boqolkiiba 32.
Gobolka waxaa ku yaal labo isbitaal, mid waxuu ku yaal Växjö, midna Ljungby intaas waxaa sii dheer labo xarumo oo lagu daweeyo bukaanada degdega ah. Gobolka waxaa kaloo ku yaal 32 rug caafimaad, 11 kamid ah waa kuwo baraayfat ah, Växjö waxaa ku yaal goob lagu daryeelo dadka cudurada maskaxda ku dhaca qaba iyo rug loogu tala galay dadka waaweyn-, dhalinyarada-, iyo carruurta qaba cudurka cilmu nafsiga.
Gobolka Kronoberg iyo qeeybaha dhexe ee gobolka Småland waxeey caan ku yihiin soosaarida quraaradaha, waxeey kaloo caan ku yihiin dhulka dabiiciga ah ee qurxoon. Växjö waxaa ku yaal matxafka quraaradaha ee Iswiidhan, hiddaha iyo dhaqanka iyo maktabad casri ah.
Degmada Växjö waxaa loo aqoonsaday ineey tahay degmada isboortiska ee sanadka 2013. Goobta lagu magacaabo magaalada garoomaha ee Växjö waa goob loogu tala galay isboortiska kala duwan, waxbarashda iyo hogaaminta iyo xiiseyn qoto dheer.
Kronoberg waxaa ku yaal xarumo loogu tala galay soo bandhigidda nololdhaqameedyada kala duwan sida, matxafka Småland iyo guriga haajirayaasha. Waxaa ku yaal goobo dabiici ah oo qurux badan sida kayd dabiici ah iyo jardiinada qaranka oo loogu tala galay howlaha firfircoonida ee guriga dibaddiisa. Waxaa kaloo gobolka ku yaal goobo lagu xafido waxyaabaha fara ku tiriska ah ee taariikhiga ah sida Linnés Råshult. Ljungby waxaa ku yaal matxafka Ljungbergmuséet iyo Sagomuséet.
Halkaan waxaa lagu soo bandhigaa shaqooyinka ka banaan gobolka, marmarka qarkoodna gobolo uu dhow.
Vi söker svetsare till vår storkund i Braås! Svetsare, manuell
Personlig assistent till kille på 25 år i Ljungby Personlig assistent
Butiksdemonstratör / Eventpersonal extrajobb i Ljungby Eventsäljare/Eventförsäljare
Sommarvikariat inom lokalvård Städare/Lokalvårdare
Business Developer , Confectionary & Beverages Inköpare
Enhetschef till arbetsmarknadsenheten Uppjobb Sektionschef, offentlig förvaltning
Butiksdemonstratör / Eventpersonal extrajobb i Växjö Butiksdemonstratör
Sommarjobb - spontansökan Lagerarbetare
Ekonomiassistent med driv Ekonomiassistent
Driven montör till attraktivt bolag Montör, metallprodukter
Säljare sökes till Växjö Samarkand Butikssäljare, fackhandel
Modulpac AB - SÄLJARE för förpackningar med funktionell design Affärsresesäljare
Säljare sökes till Växjö City Butikssäljare, fackhandel
Sommarvikarie Ljungagården Skötare
Open position , Digital Project Leader to Älmhult Reklamchef
Logistikchef till Gunnebo Industrier Logistikchef
Köksbiträde och städare , semestervikariat till kostavdelningen Köksbiträde
Tingsryds kommun söker Kock till Trojaskolan Kock, storhushåll
Bogga 1 ee ka mid ah 61
Halkaan waxaad ka heleysaa warbixinno iyo bogag kale oo kugu xiriirinaya qaar ka mid ah jaaliyadaha iyo ururada ka dhisan gobolka.
Förening På ingång
​Förening På ingång waa ururu dhalinyaro oo xooga saaraya waxa dhacaya iskuulka ka dib, lehna nashaadaad xilli-firaaqeedka looguna tala galay dadka dhalinyarada cusub kuwasoo raba xiriir cusub, asxaab,iyo wadajir. Waxa ugu horreeya oo uu qabto PÅ INGÅNG waa in la kordhiyo fursada in la tijaabiyo waxyaabo cusub, ku hadalka iswiidhishka, barashada bulshada iyo la kulanka saaxiibo cusub oo meela kala duwan ka yimid.
Projektor ideell förening
​Ururku wuxuu maamulaa mashruuc dhalinyaro iyo waxqabad bulsho. Farac gaar ah oo ururka wuxu ka shaqeeyaa arrimaha caalamigaa, nashaadaadkaas waxaa loogu yeeraa Globala Kronoberg. Projektor waxa uu bixiyaa waxaa ka mid ah meelo ay gu tababartaan dadka cusub, howlo iyo kulan si loo hormaryo fikradaha gaarka ah iyo isxilqaanka.
Ciyaaraha Småland waa magac lagu kulmiyey daladaha ciyaaraha ee Småland iyo Barayaasha ciyaaraha ee SISU. Howsha ururka waa in uu kaalmeeyo daladaha iyo ururadda ee Småland. Waxaan ku dhalineynaa hormarin iyo waxaan siineynaa kaalmo iyo khidmo, oo ay ka mid yihiin su'aalaha khuseeya ciyaaraha carruurta iyo dhalinyarada, ciyaaraha ballaaran iyo caafimaadka, hoggaaminta iyo hey'adaha, su'aalaha qiyyamka iwm. Ka eeg haddad rabto wax bada boggeena internetka
Ciyaaruhu waxey qeyb weyn ka qaataan isdhaxgalka degidda wejiga-hore ee iswiidhishka cusub iyo qaxootiga dhowr fac deggenaa. Dhaqdhaqaaqa ciyaaraha wuxuu hadda sii kordhiyey shaqada ah in uu baro dadka cusub nashaadaadka ururada dhaqdhaqaaqa ciyaaraha. Dalad dhexaadka waxey heshay boos gooni ah iyo hanti gaar ah si ay u kaalmeyso shaqada ururada ciyaaraha.
Växjö Röda Korskrets
Växjö rödakorskrets waxey qabataa nashaadaad bada oo ah taageerid isdhax-galka looguna tala galay dadka cusun ee deggan degmada Växjö. Ayada oo la kaalmeysanyo ku dhowaad 200 qof oo iskood isku xilsaaray ayaan waxaan la gaareynaa kaalmo dadka aan rabno maalin kasta.
Isniinaha iyo arbacooyinka waxa la qabtaa cawinaada layliyada iyo tababarka luqada kuwa u baahan in laga kaalmeeyo luqadda iyo leyliyadda.
Usbuucii mar waxaa la qabtaa koorsada dabaasha oo dumarka ajnabiga loo qabto.
Mentor till Mentor waa nashaad hage ah kasoo u suurta geliya shaqsiyaadka cusub iyo qoysaska hagge iswiidhish ku hadla/ ama qoys hage ah si loo taageero isdhax-galka bulshada ayadoo la siticmaalayo luqadda, dhaqanka, iyo bulsho.
Kompis till Kompis waa nashaad hage ah kasoo siinaya dhalinyarada kaligood yimid saaxib ku hadla luqada iswiidhishka si uu u kaalmeeyo isdhax-galka bulshada.
Waxaan bixinaa nashaadaad iyo tababar luqadeed looguna tala galay daka qaxootiga ah ee deggan xerro qaxooti.
Halkan waxaad ka arki kartaa khidmada laga heli karo gobolka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa qaanadda baaridda ee khariidada si aad u hesho una caleemadaysid boos tusaale ahaan cinwaanka deggaanka.
Degmooyinka gobolka ku yaalo
Välj kommun Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö
Gobolka Kronoberg waxuu ka kooban yahay sideed degmooyin: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö iyo Älmhult. Växjö waa magaalo madaxda gobolka waana degmada ugu weyn ee gobolka marka laga fiiriyo dhinaca tirada dadka: ku dhowaad 85 000 oo qofood. Degmada Lessebo waa tan ugu yar waxaana degan 8 000 oo qofood. Tirade dadka ee gobolka kor ayeey sii aadeysaa sanadyadii ugu dambeeyay waxaana ku kordhay 1,7%.